सुत्केरी खान माईत आएकी मञ्जु घर फर्किन पाईनन् – Peacepokhara.com
सुत्केरी खान माईत आएकी मञ्जु घर फर्किन पाईनन्
मध्यरात झम झम पानी परिरहेको थियो । अचानक भूकम्प गएजस्तो ठूलो आवाज आयो, गोठमा रहेको भैसी करायो । निस्केर हेर्दा गोठ भत्कएछ । दाम्लो काटेपछि भैसी आगनतिर आयो । त्यति बेला सम्म के भएको हो थाहा थिएन । अल्लि पर गएर हेर्न भिषण बर्षा बाधक बन्यो । बिहान हेर्दा साझ सम्म आफ्नै आसपास भएका ६ घरको नामोनिसान थिएन ।
यत्ति भनेपछि उनको गला अबरुद्ध भयो । डाको छोडेर रुन थालिन् । सामुन्ने पछ्यौराले छोपिएको शबमा घोप्टो परिन् । ‘हे मेरो वावा तिमीले छोडेर गयौनि’ दर्दनाक उनको यो आवाजले आसपास रहेकाहरु मलिन अनुहार लगाएर हेरिरहे । कोहि सम्झाउन थाले ।
आफैले जन्माएर हुर्काएकी छोरीको शब आफ्नै काखमा नातीनि सहित लम्पसार हुदा कुन चाँही आमाको मन नरोला र ? ४५ बर्षिय बिभा परियार छोरी र नातिनीको शब काखमा राखेर बिलौना गर्दै थिईन् ‘हे भगवान अब म के गरौ ? ’
तनहुको भिमाद घरबाट एक महिना अघि तीन महिनाकी छोरी सहित सुत्केरी खान माईत आएकी २१ बर्षिय मन्जु सुनारको जीवन लिला त समाप्त भयो नै साथमा चार महिनाकी छोरी सीमा सुनारलाई पनि संगै लिएर गईन् । शुक्रवार घर फर्किने तयारीमा रहेकी उनि कहिल्यै नब्युझिने गरी चिर निन्द्रामा परिन् ।
माईती घर र परिवार सकुसल छन् तर उनी एक रातको लागि भाउजुको घरमा जानुनै अ—शुभ भयो । ‘ दाई पनि बिदेशमा, भाउजु एक्लै भएकाले साथि भईदिन गएकी मेरी छोरी सधैको लागि गईन् । ’ भक्ककानिदै आमा बिभाले भनिन् ।
काखमा छोरी च्यापेर सुतेकी उनको शब माईतिघरमा पिँढीमा ल्याएर राख्दा पनि उस्तै थियो । लाग्थ्यो उनी छोरीलाई च्यापेर सुतिरहेकी छिन् । पछ्यौरा पल्टाउदै वारवार बिभा छोरीको अनुहार हेर्थिन् डाको छोडेर रुन्थिन् । ‘यहि घरमा सुतेको भएपनि तिमी हुन्थ्यो नि ’ बिभाले शब छोपिएको पछ्यौरीले अलिकति पल्टाएर भनिन् ‘यस्तो हुनु रै छ र अन्त सुत्न जानु परेको । ’
उनिसंगै पहिरोमा परेकी रिता सुनारको अझै पत्तो छैन । दिदी सिमासँगै भाउजुको घरमा सुत्न गएकी जुना भने बचिन् । घाईते उनको पोखरामा उपचार भैरहेको छ । मञ्जुका पति रोजगारीको लागि विदेशमा छन् ।
पोखरामा पिपिएल क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु , पोखरा पल्टनको बिजयी सुरुवात
सिलिगुडीमा पोखरा प्रमोसन गर्दै पर्यटन व्यावसायी
peacepokhara 27 Feb 2016